Hindise Cosub: hala mamnuuco guurka qasabkaa iyo kan caruurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Göran Lambertz ayaa soo bandhigay taladaan
Hindise Cosub: hala mamnuuco guurka qasabkaa iyo kan caruurta
La daabacay torsdag 24 maj 2012 kl 10.32
Waxaa maantay la soo bandhigay Hindiso la doonayo in lagu mamnuuco guurka qasabkaa ee caruurta, ujeedka ayaa ah in nolasha loo sahlo caruurta ku nool handadaa ah in la guuriyo rabitaan la aantood. Ruuxa jabi sharcigaas ayaa waxa uu mutaysan doonaa cinqaab xarig oo afarsano ah.
La taliyaha amuuraha cadaalada Göran Lambertz ayaa ah ruuxa hindisahaan soo bandhigay.
- Hindisaha waxaa la rabaa in lagu mamnuuco guurka qasabka ah iyo guurka caruurta
-Waxaan sidoo kale hindisaha ku soo bandhigi doonaa in xataa la mamnuuco guurka aan rasmiga ahayn, sida kuwa shirci ahaan ansaxa aheeyn, lakiin caadiyen u shaqeeya guur ahaan. Waxaan ku talinaynaa in meesha laga saaro fursada lagu dalbado ka cafida ama dispens si ay ilmahu u guursadaan ayuu ueri Göran Lambertz.
Hindisahaan ayaa ku talinaya in qofka ku qasbaa qof kale guur in lagu xukuma afar sanno oo xarig. Waaridka u ogalaadaana cunuga ay da'diisu ka yartahay 18-sanno in uu guursadana in lagu xukumo ganaax ama labo-sanno oo xabsiya.
-Arinta xaasaasiyada leh waxa ay tahay in dembi laga dhigo guurka caruurta gaar'ahaan kuwa aan sharciyin ansaxa ahayn, sida kuwo ay dhaqan iyo diinba u ah gruppyada qaar. Waxa uuna Lambertz yeri waxaa suurta gal ah in dadk qaar arinkaan u arki karaan in aan ku talax tagayno oo ku qasbayno dhaqanka bulshada Sweden gruppyadaan.
Shabakad haweeneed oo la yiraahdo Alla kvinnors nätverk oo ah shabakad si tadawacnimo ah gacan ugu fidisa dhallinyarta loo geysto cadiisyada ku dhisan sharaf dhowrka ayaa ayaguna sidatan u arka Hindisahaan la soo bandhigay.
- Micno weyn ayey ugu fadhinkartaa dhallinyarta cadaadiska sharaf dhiowrka la kulma, waaana arin aaad u wanaagsaan waayo qoyska ayey u sahlaysaa in ku dhuuntaan sharciga gadaashiis, marka sharci leh awood cabsi gelineed. Ayey tiri Azam Qaria oo howlmgasha alla kvinnors nätverk.
Barofesar Jan Hjärpe oo ku taqsusay Islamka ayaan asagu hubin in sharcigaan u noqon doono mid wax ku ool ah dhallinyarta ku cadaadiska ku dhisan sharaf dhowrka.
Waxa uuna qabaa in wax ku oolka shacigaan keeni doonin wax weyn maadaama labo qof oo isla nool ay qoysku iyo qaraabaduba uga dhigan yahiin kuwo is qaba men sharci ahaan aan ansax ka ahayn Sweden, maadaama sharciga Sweden ogal yahay wada noolaansho ayuu yeri Jan Hjärpe.
Wasiirada cadaalad Beatrice Aska oo arintaan maantay ka hadashay ayaa sheegtay in wadanka ay ka jirto sharciyo mamnuucaya guurka lagu qasbo caruurta, tusaale marka ay dalxiis ku tagaan dalkoodi hooyo.
Nyamko Sabuni oo ah wasiirada sinaanta oo ayada iyo Beatrice Ask oo ah kuwo gudoomaya talo bixitaan ayaa waxay sheegatay in hidisahaan ka buuxdo waxyaabo badan tacliin leh lakiin uu yahay mid diraya dhambaaol cad.
- Waa muhim in la muuji in dalkaan dhaqamada qaar aan lagu dhaqmi karin oo ay sharciga ka hor imaanayaan. Marka hindisahaan mid ka cad sharciga aan maanthaysano.